बिन लादेन मारिएको भिडियो हेर्नुस् | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नम्र स्वभावका प्रवासी नेपाली गायक “देव लिम्बु”
प्रहरी चौकीमा सबै महिला →
Posted on 05/05/2011 by राजु गुरुङ्ग | १ टिप्पणी
फेसबुकमा तपाईँले यस्तो देख्‍नुभयो भने क्लिक गर्न नहतारिनुहोला। स्पाम गर्नेहरुले तपाईँलाई झुक्याउन यस्तो गरेका हुन्। सोमबार बिहान बिन लादेन मारिएको खबर आएदेखि इन्टरनेटमा यस’bout खोजी निकै बढेको छ। अनि यसैको फाइदा उठाएका हुन् स्पाम गर्नेहरुले। फेसबुकमा अहिले बिन लादेनको भिडियो देखाउने लोभले धेरै यस्ता झुक्याउने लिङ्कहरु फैलिरहेका छन्।
यसबाट बच्ने उपाय के छ त ? विश्वस्त स्रोतबाहेक भिडियो हेर्न पाइएला भन्ने आशाले जुन पायो त्यही लिङ्कमा क्लिक नगर्नुस्, यो नै उत्तम हुनेछ।
अहिले फेसबुकमा फैलिरहेको एउटा फटाहा लिङ्क यो पनि हो। कसैको वालमा तपाईँले यस्तो देख्‍न सक्नुहुन्छ। सीएनएनको भिडियो, ओबामाले प्रसारण गर्न रोक लगाएको, विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको भनी तपाईँलाई लोभ्याउने शब्द त्यसमा राखिएको हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई एउटा फेसबुक पेजमा लगिन्छ, त्यही जानकारी आफ्नो वालमा पनि सेयर गर्न बाध्य बनाइन्छ अनि एउटा सर्भेको पेजमा लगेर तपाईँलाई फालिन्छ। केको भिडियो आउनु नि ! यस्तो लिङ्क देख्‍नुभो भने क्लिक गर्दै नगर्ने र जसको वालमा त्यस्तो लिङ्क देखिएको हो, उसलाई त्यो हटाउन भन्नु राम्रो उपाय हुन्छ।
त्यसैगरी यो अर्को त्यस्तै फटाहा लिङ्क हो। यो पनि अहिले फेसबुकमा निकै फैलिरहेको छ। यसमा लादेनलाई मृत्युदण्ड दिइएको भिडियो देखाउने भनिएको हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने एउटा जाभास्क्रिप्ट कोड ब्राउजरको एड्रेस बारमा पेस्ट गर्न भनिन्छ। त्यसो गर्नुभयो भने भिडियो हेर्न पाउँला भन्नुभएको? भए पो हेर्नु भिडियो! बरु टाउकोमा हात राखे हुन्छ फँसियो भन्दै। तपाईँको नाममा अब तपाईँका साथीहरुको वालमा त्यो फटाहा लिङ्क सेयर हुन जान्छ। उनीहरु पनि फँसे भने उनीहरुका साथीहरुको वालमा….यसरी नै फटाहा लिङ्कको राज हुनजान्छ। गर्ने के त ? अघि नै भने जस्तो, यस्ता लिङ्कहरुमा क्लिक नगर्ने !
फेसबुकमा मात्र हैन, पुरै इन्टरनेटमा तपाईँलाई फँसाउन लादेनको भिडियो वा फोटोको जाल थापेर बस्नेहरु थुप्रै छन्। सावधानी अपनाउन जरुरी छ।
One response to “बिन लादेन मारिएको भिडियो हेर्नुस्”
Tanka P tmilsina | 07/05/2011 मा 2:36 अपराह्न |
video kata cha